कुरी–कुरी अस्पताल::Online News Portal from State No. 4
बागलुङमा पछिल्लो समय जिल्लाको सिगानाकी एक महिला चार जिल्ला घुमेर प्रसुती सेवा लिएको बिषय चर्चामा छ । स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्याम र सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चाको बिषय बनेको यो मुद्धा सर्वसधारणको तहमा पनि चर्चामा नै छ । चिया पसलदेखी चोक–चोकमा हुने भेटघाटसम्म धौलागिरी अञ्चल अस्पताल र पर्वत जिल्ला अस्पतालकी डा. हेमा छन्त्याल अहिले चर्चाको बिषय बनेकी छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको आशाको केन्द्रको रुपमा रहेको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका सानातिना कमी कमजोरी र पर्व जिल्ला अस्पतालकी डा. हेमा छन्तयालले देखाएको मानवीयताको मुद्धा सर्वसाधारणको तहमा चर्चामा आएको छ ।
सिगानाकी सरस्वती जिसीलाई अस्पतालले रातिको समयमा पोखार रिफर गर्नु बर्षाका कारण बाटो रोकिनु र पोखाराका लागि हिँडेको बिरामी पर्वत जिल्ला अस्पतालहुँदै म्याग्दी जिल्ला अस्पतालमा पुगेर अन्तिम समयमा अप्रेसनमार्फत सफल तरिकाबाट प्रसुती सेवा पाउनु सुखद कुरा हो । तर अञ्चल अस्पतालमा रहेको चरम बेथितीका कारण एकजना प्रश्रव पिडामा रहेकी महिलाले दुख पाउनु आँफैमा लज्जाको बिषय त हुँदै हो त्यसमा पनि अस्पतालले अन्य बिरामी र आम सर्वसाधारणलाई दैनिक प्रबाह गर्ने सेवामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । अस्पतालमा १६ जना बिषेशज्ञको दरवन्दी छ । दरवन्दी अनुसार बिषेशज्ञ डाक्टरहरु आउँदैनन् । आएका पनि टिक्दैनन् । अहिले अस्पतालको प्रशासनदेखी बिषेशज्ञ सेवा प्रबाह गर्ने एकजना मात्रै डाक्टर मात्रै छन् । बिरामीले उपचार नपाएका कारण अञ्चल अस्पताल जस्तो संस्थालाई एउटा सामान्य स्वास्थ्य चौकीको भन्दा कम मान्यता राखेर सर्वसाधारणको तहबाट सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भैरहेको छ । धौलागिरी अञ्चल अस्पातल जुन दिन जिल्ला अस्पतालबाट स्तरोन्नती भएर अञ्चल अस्पतालको रुपमा स्थापित भयो सोही दिनदेखी नै डाक्टरको अभाव रहेको छ ।
अस्पतालमा भन्दा गाउँ–गाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरु उपलव्ध रहेको तथ्याङक छ । अस्पतालमा रहेको यो बेथिती त्यहाँको प्रशासनको मात्रै नभएर जिल्लाकै राजनीतिक र प्रशासनिक निकायको चासोको बिषय हो । अस्पतालमा डाक्टर नआउने आएका पनि नटिक्ने समस्या किन भैरहेको छ भन्ने बिषयमा अब खोजी हुनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच र हस्ताक्षेपको आधारमा चिकित्सकलाई टिक्न दिईंदैन भने त्यसको अन्त्य किन नगर्ने । क्षणभरमै कमाउने दाउमा रहेका कारण डाक्टरहरु आउँदैनन भने उनीहरुले लोकसेवा लडेर खाएको जागिरमा सरकारले धावा किन नबोल्ने । जागिर खाने बेला गरेको प्रतिबद्धता अनुसार चिकित्सकहरुले काम गर्न किन नसक्ने ? यि र यस्ता आम बिषयमा अब सर्वसाधारणको तहबाट नै जिज्ञासा उठ्न जरुरी छ । अस्पताललाई काम गरेन, काम नलाग्ने भो भनेर सतोसराप गरेर मात्रै अस्पताल भित्रको बेथितीमा सुधार आउँदैन् । त्यहाँका समस्या पहिचान गरे त्यसको समाधानको खोजी मुख्य बिषय हो । अस्पताल जस्तो आम नागरिकको विश्वासको थलोले उनै नागरिकको विश्वास गुमाउने वातावरणको अन्त्य गर्न जरुरी छ । जसका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण होस ।